Adigu waxaad leedahay xuquuq iyo waajibaad markaad joogto goobtaada shaqada iyo dhanka shaqo-bixiyahaaga. Arrimaha ku saabsan waxa ku khuseeya adiga shaqaale ahaan iyo shaqo-bixiyahaaga waxaa lagu magacaaba sharciga shaqo.
Waxaad xaq u leedahay heshiis shaqo oo qoraal ah. Heshiiskan waa inay ku qorantahay
magaca shaqo-bixiyaha iyo lambarka ururkooda
magacaaga iyo lambarkaaga shakhsiga ah
dhererka shaqalaysiintan oo wadata taariikhda bilowga iyo taariikhda dhamaadka
haddii shaqadaadu tahay wakhti buuxa, wakhti nus ah ama keliya marka laguu baahdo
waxa aad helayso mushahaaro ahaan
nooca hawlaha shaqo ee aad qaban doonto
waxa uu yahay mansabkaaga xirfadeed.
Akhri nidaamyada shaqo ee kala duwan
Waa shaqo-bixiyaha waxa go'aaminaya nooca wakhtiyada shaqo ee ansaxa ah. Goobaha shaqo qaarkood waad diiwaan-gelinaysaa wakhtigaaga shaqo. Xafiisyo badan waxaa caadi ka ah waxa lagu magacaabo wakhtiga shaqo ee dabacsan. Wakhtiga shaqo ee dabacsan waxaa xukuma heshiiska goobta shaqada ama in shaqo-bixiyuhu si rasmi ah kuugu sheegay arintan.
Waxaa kale oo xitaa jira sharciga wakhtiga shaqada lehna qawaaniinta ku saabsan inta aad shaqaynayso calaa maalin, calaa toddobaad iyo calaa sanad.
Sharciga wakhtiga shaqo
Jadwalka shaqo waa heshiiska nooca maalmaha iyo wakhtiyada aad shaqayn doonto. Haddii qof madax ah aanu doonayn inaad shaqayso maalin iyo wakhti ku qoran jadwalkaaga waa in shaqo-bixiyuhu si kastaba ha ahaatee bixiyaa mushahaaradaada wakhtigii aad ku heshiiseen.
Waa shaqo-bixiyahaaga kuwa leh mas'uuliyada weyn ee dhanka deegaanka shaqo si aad u samayn karto shaqadaada iyadoo aan khatar u layan caafimaadka ama dhacdo shil. Sharciga deegaanka shaqada waxaa ku jira qawaaniinta ay tahay inay raacaan shaqo-bixiyaha iyo mas'uuliyiinta kale ee ilaalinta si looga hortago dhaawacyada loona abuuro deegaan shaqo oo fiican.
Sharciga deegaanka shaqada
Haddii aad dhaawacanto
Haddii uu kugu shil ama ku dhaawacanto shaqada waxaad xaq u yeelan kartaa magdhabid. Ka bilow inaad u sheegto shaqo-bixiyahaaga kaas oo ay waajib ku tahay inay wargeliyaan Qasnada Caymiska iyo Hey'ada dawladeed ee deegaanka. Caawimaad ka hel wakiilka ilaalinta haddii aad u baahantahay caawimaad.
Samee wargelinta dhaawaca shaqada
Haddii aad xanuusato waxaad xaq u leedahay inaad guriga joogto kana maqnaato shaqada. Waa muhiim inaad samayso wargelinta xanuunka oo shaqo-bixiyaha ayaa go'aaminaya sida ay u dhacayso. Waxay ahaan kartaa iyadoo loo maro telafoon, e-mayl ama nidaam kombiyuutar.
Haddii ilmahaagu xanuusado waxaad xaq u leedahay inaad fasax ka ahaato shaqada oo qaadato gunada waalidka ee ku meel gaarka ah ilaa iyo inta ilmahani buuxinayo 12 sano. Maalin shaqo markay tahay waxaanu tani ku magacawnaa vab, daryeelka ilmo. Hooyooyinka iyo aabayaasha labaduba xaq ayay u leeyihiin inay fasax ku ahaadaan daryeelka ilmo.
Gudaha Iswiidhan dhamaan shaqaaluhu waxay xaq u leeyihiin 25 maalmood oo fasax ah muddo sanad gudaheed ah iyadoo aan loo eegayn da'da iyo nidaamka shaqo. Waxaad heli kartaa ayaamo fasax oo dheeraad ah taas oo ku xiran heshiiska guud iyo heshiiska shaqada. Fasaxa waxaa loogu talogalay inaad ku nasato kuna soo kabato.
Waalid cusub ahaan waxaad xaq u leedahay inaad guriga joogto ilaa ilmuhu noqonayo hal sano iyo bar. Magdhabkaaga xilliga fasaxa waalidnimo waxaa lagu magacaabaa gunnada waalidka oo waxaa bixisa Qasnada Caymiska. Magdhabkani wuxuu ku salaysanyahay mushahaaradaada iyo faa'iidooyinka kale ee laga helo shaqo-bixiyaha. Caymiska waalidka wuxuu khuseeyaa hooyooyinka iyo aabayaasha labadaba. Saddex bilood ayaa kayd u ah mid kasta oo waalidka ka mid ah.
u hogaansanto oo raacdo wakhtiyada shaqada
samayso hawlahaaga shaqo
raacdo tilmaamaha iyo qawaaniinta nidaamka
raacdo qawaaniinta amaanka
isticmaasho qalabka ilaalinta haddii tani loo baahdo
weydiisato shaqo-bixiyaha haddii aad doonaysid inaad ku hawlanaatid shaqo kale oo tan bar-bar socota
aanad banaanka shaqada ku samayn wax dhaawici kara shaqo-bixiyahaaga
raacdo waajibka xog-qarinta haddii aad saxeexday heshiiska qarsoodiga
ka fikir in xaqaaga inaad dhaliisho shaqo-bixiyaha waxaa la socda shuruudo
aanad socodsiin hawl tartan kula jirta shaqo-bixiyahan.
Sinaanta iyo takoorida
Gudaha Iswiidhan waa in haweenka iyo ragu lahaadaan xuquuq, waajibaad iyo fursado isku mid ah. Waa in xitaa bulshadu ay xor ka ahaataa takoorida.
Ka shaqaynta Iswiidhan
Akhri dheeraad ku saabsan waxa aad u baahantahay inaad ka fikirto iyo waxaad u baahantahay inaad samayso si aad uga shaqayso ama shirkad uga socodsiiso gudaha Iswiidhan.